Fa maninona ny vanin-taona fitaratra laminated? Ahoana no fampiasana azy? - fitaratra HHG
Fitaratra laminated dia azo antoka, tsy hanisy ratsy antsika ny famoretana, izay no mahatonga ny fitaratra laminated fitaratra. Ny mpanamboatra fitaratra gony dia nampiditra ny antony fahanterana amin'ny fitaratra laminated.
1. Fanitarana mafana sy mangatsiaka mangatsiaka. Amin'ireo karazan-javatra rehetra amin'ny fitaratra azon'ny vera laminated, ny fiovan'ny hafanana dia lafiny iray lehibe. Eo ambanin'ny fitarihan'ny fitrandrahana mafana sy ny fihenan'ny hatsiaka, dia niova ny firafitry ny fitaratra laminated, ary hisy halavan'ny lava-java-bolo na gony lava eo amin'ny vera, izay manafoana ny ain'ny serivisy.
2.Tontolo fonenana. Raha apetraka amin'ny rivotra an-kalamanjana ny vera miloko marefo, raha tsy misy fepetra fiarovana, dia ho tratran'ny ultraviolet sy ny antony hafa mandritra ny fotoana maharitra ny fitaratra, ka mahatonga ny fihenan'ny herin'ny fitaratra, noho izany dia manafaingana ny fahanterana amin'ny laminated vera.
3. Ny fitaratra laminated Toughened dia tokony hangonina ao anaty fitoeran-kitapo, paleta na tranga hazo. Ny vera tsirairay dia rakotra plastika na taratasy, ary ny vera sy ny boaty fonosana dia hofenoina fitaovana maivana sy malefaka izay tsy mora miteraka vera sy tsy fahita firy. Ny boaty fonosana tsirairay dia voamarika miaraka amin'ny teny hoe "miakatra, avo ny fampirantiana, mitsangana, mitsangana tsara, haingo fitaratra, kilasy", sns.
4.Ny fitaratra miloko laminated dia afaka feon'ny fiara maro samihafa. Mandritra ny fitaterana, ny trondro hazo dia tsy apetraka amin'ny fomba ery ambony na somary, ny làlambe dia tokony ho mifanaraka amin'ny lalana mitondra ny fiara fitaterana, ary azo raisina ny fepetra mando. Rehefa mitazona fitaratra, vera laminated maloto tsy azo ampiasaina dia hotehirizina mijoro ao anaty efitrano maina sy manala rivotra.
5. Ny fitaratra laminated Toughened dia karazana vokatra fitaratra miaraka amin'ny adin-tsaina anaty. Aorian'ny famolavolana, ny fanapahana, ny fandefasana ary ny sealing sealing dia tsy avela, raha tsy izany, ny faran'ny fitaratra miloko matevina dia hipoaka ary hiteraka fihenjanana ny fikorontanana, izay tokony ho arovana tsara. Aza mampiasa zavatra maranitra sy sarotra hamely ny sisin'ny fitaratra, raha tsy izany dia mora ny nanapaka ny fitaratra.
6. Alohan'ny hametrahana ny vera miloko matevina dia alaviro ny mari-pana, ny hamandoana be ary ny orana. Ny fitaratra eo amin'ny toeram-pananganana dia tokony hotehirizina ao amin'ny toerana misy rivotra sy maina. Raha sendra ny fiovan'ny toetr'andro tampoka na ny orana mivatravatra, ny tompon'andraikitra amin'ny fananganana dia tokony hanara-maso ny tranokala mba hisorohana ny fitrandrahana rano sy ny tsy fahitana ny fantsom-baravarankelin'ny alàlan'ny fandatsahana ny boaty fitetezana vera.
7.Rehefa mametraka ny fitaratra anaty rano anaty rano dia tokony ho azo antoka tsara ny fampandehanana rano sy ny leakage ao amin'ny rafitra iray. Voalohany, ny ampahany amin'ny fifandraisana amin'ny rano dia tsy maintsy vita amin'ny fitaovana feno rano. Faharoa, ny hantsana eo anelanelan'ny fitaratra sy ny firafitry ny metaly dia tsy maintsy feno tanteraka amin'ny polysulfide baoty na silicone vita amin'ny sealing tsara. Ny fametrahana ny famolavolana sy ny fananganana dia tokony hifanaraka amin'ny fepetra takian'ny fenitra ara-teknikan'ny indostrian'ny fanabeazana ho an'ny firenena amin'ny fampiharana ny vera jgj113-97.
Vera fiarovana amin'ny alàlan'ny baoritra miaro amin'ny fiainana
Vera miloko vita miloko
Fitaratra vita amin'ny volafotsy-volafotsy
Llametaly fitaratra matevina
Lamba vita amin'ny takelaka glacial vita amin'ny glamial ho an'ny fisarahana